Tailoring - WoW Guides | WoW Guides
Mampiasa lamba lamba ny mpanjaitra mamorona skeins ary miaraka aminy dia manenona fiadiana lamba izay hahatonga antsika tsy ho voasakana amin'ny ady.
Zandalari sy Kul tiras Tailoring Guide - Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Zandalari Tailoring sy Kul ity dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny handeha amin'ny làlana ...
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao sasany momba ny asan'ny Tailoring in Battle for Azeroth. Rehetra…
Torolàlana momba ny fanamboarana 1-800
Aloha! Amin'ity Tailoring Guide ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianatra anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra mankany ...
Torolàlana: Fandokoana amin'ny legiona - Raiso ny lamina rehetra
Salama daholo! Sibê, Mpanarato Tomponao avy any GuiaswoW aho izao, tapa-kevitra ny hanao akanjo sy hikarakara lamba….
Draenor Tailoring Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Tongasoa eto amin'ny Warlords of Draenor Tailoring Guide izay hanampy anao ho tonga amin'ny ambaratonga 700, miampy…
Torolàlana momba ny fanamboarana 1-600
Ity ny torolàlana hampakatra Manamboara 1 hatramin'ny 600 ao amin'ny Mists of Pandaria. Afaka mamorona ianao amin'izany fiadiany, bolsas ary ny tena tadiavina kiran'ny tsipelina, iray amin'ireo asa tena tadiavin'ny (
Ireo mpanjaitra dia afaka mahita lamba amin'ny humanoid sy andian-dahalo hafa, na izany aza dia manana vintana ambony kokoa izy ireo hahita lamba fanampiny amin'ny
Scavenge lamba avaratra.
Torolàlana momba ny fanamboarana 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Fanamboarana asa-tanana amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Ny fanamboarana dia asa iray ahafahanao manamboatra fitaovana indrindra ho an'ireo kilasy mampiasa lamba: mpamosavy, Warlock ary Pretra.
Asa asa matetika ampiarahina aminy fisikidianana satria tsy mitaky fanangonana izany, ary ny zavatra izay nataonao dia mety hanimba anao.
Omano ny fanjaitrao, mipetraha eo am-patana, ary manomboha manamboatra lamina tsara indrindra ho an'ireo mpamosavy rehetra ao Azeroth.
Torolàlana momba ny fanamboarana 450-525
Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hampiseho aminao ny fomba mora indrindra hiakaranao Haingo haavo 450-525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Manamboara 1 hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana momba ny fanamboarana hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm.
Miaraka amin'ny fidiran'ny Cataclysm, hanjavona ireo sampana telo farany amin'ny fanjairana, iray ihany no hisy. Hantsoina ny fitaovana vaovao farany Lamba nofinofy ary azo foronina amin'ny fampiasana lamina sy fitaovana isan-karazany. Ny rehetra afa-tsy iray amin'ireo lamina Dreamcloth enina samihafa dia azo foronina indray mandeha isan-kerinandro. Ny lehibe Nofinofy fandringanana tsy manam-potoana fiandrasana ianao, fa mila 5 x Chaos Orb afaka mampiasa.
Ny lamina roa voalohany Lamba nofinofy Misy amin'ny ambaratonga 500 izy ireo. Ity manaraka ity dia azo ianarana amin'ny ambaratonga 505, 510, 515 ary 525.
Torolàlana momba ny fanamboarana 1-450
Tongasoa eto amin'ny Tailoring Guide izany dia hampiseho aminao ny fomba hampiakarana haingana sy haingana an'ity asa ity amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 450. Nohavaozina amin'ny patch 3.2.
Hihanika ity asa ity dia mila lamba be ianao ary tsy dia mora vidy izy ireo. Azonao atao ny mandeha mahita azy ireo na mividy azy ireo amin'ny varotra, saingy tokony ho fantatrao fa raha hividy azy ireo ianao dia mila vola be. Ity asa ity dia mety indrindra raha atambatra amin'ny Enchantment, satria amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manala baraka ny ankamaroan'ny zavatra ho noforoninao, azonao atao koa ny mangataka namana iray handiso fanantenana anao. Azonao atao ny manamarina ny anay Torolàlana manintona, hampiakarana izany asa izany.
Tadidio fa ity torolàlana ity dia natao mba ahafahanao miakatra haingana araka izay azo atao ilay asa, imbetsaka ireo zavatra noforoninao dia tsy ho tsara indrindra amin'ny ambaratonga anao na tsy hivarotra tsara, raha te hivarotra azy ireo ianao.